Ire ahịa Agile bụ Mbido, Ọ bụghị mgbanwe, na ihe kpatara ị ga - eji kwado ya | Martech Zone
Site na iwu ulo rue ulo ngwanro.
N’afọ ndị 1950 ka Nlereanya Waterfall Development ẹkenam n'ime nhazi na mmepe ngwanrọ. Usoro a bu ihe omuma nke ulo oru n'icheputa ihe ebe, site na nkpa, ekwesiri imezi azịza kwesiri tupu oru amalite. Na, na ụwa, azịza ziri ezi ezi uche! You nwere ike iche n'echiche nke ebe ị kpebiri iwu ụlọ elu elu ụzọ dị iche iche site na ụzọ ahụ?
Nke ahụ kwuru, ihe sitere na iji usoro a na mmepe ngwanrọ bụ na atụmatụ nke ngwanrọ ahụ (atụmatụ + ux) kwesịrị ịbụ nri n'ihu. Typicaldị mmepe mmepe malitere site na Marketingzụ ahịa na-eme nyocha na ahịa na nsogbu ma na-enyekwa nghọta ha n'ụdị Akwụkwọ Nchịkwa Ahịa na / ma ọ bụ Akwụkwọ Nchọpụta Ngwaahịa. Ndi otu mmepe ga-ehulata wee wuo ihe ndi otu ahia kwuru na ahia choro ma mgbe ha mechara, ha weghachitere ndi ahia ahia ihe ha mechara. Ihe nlereanya a rụrụ ọrụ. Ọ rụkwara nke ọma maka ụlọ ọrụ dịka Microsoft.
Ihe na-efu na usoro a. Ndị Ahịa.
Ndị Nhazi Anhazi
Gịnị bụ Agile?
Ndị na-emegide Mad Men na-abịaru nso.
Mepụta Akụ Agile na Azụmaahịa Ndị Isi
Ihe Atọ Na-eduzi Icheta
Agile bụ Banyere Nduzi, Ọ bụghị Nchịkwa Karịa
Gịnị na-amalite dị ka Eye Rolling Nwere Ike Eyeghọ Anya emepe - ma ọ bụrụ na ị na-ahapụ ya
Dezie Akwụkwọ ahụ
Na ngwụcha afọ 90, ịntanetị na-eto ngwa ngwa na ụlọ ahịa azụmaahịa jikọtara ya na ụlọ ọrụ ịntanetị ọhụrụ fangled na, nke nwere ike bụrụ nke ka mkpa, na-amalite inye ụzọ dị mma iji tinye ngwanrọ. Agakwaghị achọ onye nrụpụta ka ọ nyefee ndị ahịa ya ngwaahịa ikpeazụ ha na nna ukwu ọla edo ha nwere ike itinyezi koodu ikpeazụ na ịntanetị na ndị ahịa ha.
Na nkenye nke sọftụwia ha ozugbo na ndị ahịa, ndị mmepe na ndị nrụpụta nwere ohere ịnweta data ọnụọgụ gbasara etu ngwaahịa ha si arụ ọrụ. Obughi ezigbo nzaghachi site na ahia ma obu ihe omuma ndi ahia. Kedu atụmatụ eji mee ihe na ndị na-abụghị! Ozi ọma niile ọ dị mma? Mbanụ.
Model Water Development na usoro azụmaahịa ya nke ọkara narị afọ gara aga gosipụtara ụzọ gara nke ọma kwụsịrị ịrụ ọrụ. O kweghi maka nzaghachi oge. Enweghị echiche nke ngwa ngwa.
N'afọ 2001 otu ndị mmepe na ndị nhazi nhazi zutere na a Ndabere na ugwu Utah iji kwurịta otu usoro ọhụụ nwere ike isi mee ka njikọ dị mma na ndị ahịa wee rụpụta otu ndị siri ike na sọftụwia ka mma. Na nzukọ ahụ Agile Mmepe a mụrụ mmegharị ma a na-ewere ya ugbu a dị ka usoro kachasị mkpa maka iwuli ụlọ ọrụ. Chee echiche nke ọma banyere oge ikpeazụ ị zutere otu ndị injinia na-ekwu okwu banyere mpempe akwụkwọ ha na akara ugbu a.
Dika umunne anyi ndi injinia na-ario otu n’ime nsogbu kacha agbanwe agbanwe n’ime oge gara aga ahia kariri ndi n’enweghi nsogbu. Anyị erite uru site ọhụrụ agility na injinia bụ anyị nwere ike ikwu na Anyị na ngwaahịa na-Ẹnam ekese nọgidere. Ewezuga nke ahụ, anyị na-eji usoro aghụghọ azụmaahịa na sistemụ anyị ji eme ihe maka afọ 100 + gara aga. Usoro nhazi nke yie nke oma dika Waterfall Development Model.
Ahịa bịara na nri azịza n'ụdị mkpọsa, akara mkpado, akara ngosi wee pụọ ruo mgbe anyị mechara tupu anyị apụta site na ọrụ anyị iji tinye ọrụ anyị n'ọrụ na ọ bụ ọwa oche. Gịnịkwa mere anyị ga-eji gbanwee? Usoro a nwalere ma bụrụ eziokwu arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ iri afọ. Mana ọ naghị arụ ọrụ ọzọ ma anyị nwere Dorsey na Zuckerberg ikele.
Mgbasa ozi nke netwọkụ mmekọrịta emeela ka ọ dịrị ndị ahịa anyị mfe na atụmanya ịzaghachi maka mkpọsa anyị, taglines na logos en mass. Nke ahụ dị mma? Ọ kwesịrị ịbụ, na ahịa, anyị na-amata na ikike anyị nwere ịzaghachi n'ihi enweghị usoro azụmaahịa. Anyị adịghị agile.
Na 2011, na San Francisco, otu ndị na-ere ahịa zutere ka ha kwurịta mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya na teknụzụ chọrọ ka ndị otu azụmaahịa rụọ ọrụ dị iche. Nghọta na myirịta dị n'etiti injinia na ahịa dị mkpa yana na Agile Development Manifesto kwesịrị ịbụ ihe nlere maka Ahịa.
Na nzuko a nke akpọrọ Sprint Ọdachi ndị ahịa a depụtara Ihe ngosi ahia ahia Agile na afọ 3 gara aga anyị ahụla echiche banyere Agile Marketing amalite ijide.
Agile bụ usoro nhazi iji gboo mkpa bara uru, kwa ụbọchị maka azụmaahịa, ma na-echekwa oge "enweghị isi" iji chọpụta ohere ọhụụ na nnwale. Ihe a na-agbanwe mgbe niile n'etiti ihe ọhụrụ (na-abịa na echiche ọhụrụ na ịnwale azịza ọhụụ) na ahịa (chọpụta ọrụ ndị ahịa chọrọ ka ị meere ha) na ịdị gara gara na-enye gị ohere idozi maka ịhazi ụzọ abụọ.
Ka-eme ihe n'eziokwu. Ma ọ bụ n'ihi na ezigbo ma ọ bụ omenala ụlọ, ọtụtụ ulo oru na-eche na ha enweghị oge ma ọ bụ ego nnwale – na eleghị anya ọ dịghị mgbe ga-. Mana naenweghị nnwale, azụmaahịa dịịrị ọnọdụ na-emecha tufuo azụmaahịa na-emebi. Experimentghara ịnwale nnwale dabere na ohere azụmaahịa ọhụụ dịka ịsị na ị na-arụ ọrụ nke ukwuu iji bie ndụ iji mụta, too, na ịgbanwe na ndụ gị.
Ọnọdụ nsogbu a na-akpata ajụjụ bụ:
Kedụ ka ụlọ ọrụ gị ga-esi jiri nnukwu nsogbu taa na-ada ngwa ngwa ka ị na-ezute ọnụọgụ ego dị mkpụmkpụ na ogologo oge?
Ekwenyere m na azịza ya bụ iji usoro agile, nke gụnyere ọtụtụ obere, tụọ, nyocha nyocha-ọ bụghị otu nnukwu, dị oke ọnụ, esere-na-nkume atụmatụ. N'aka ozo, agile bu uzo Mad Mad.
Agile na-enye ohere inyocha amaghi echiche n'ime usoro kwụsiri ike nke na-enye ọhụụ na ọkwa arụmọrụ zuru oke. Ọ bụ ụzọ iji nwaa ihe ọhụụ ma mekwa ọnụọgụgụ gị. Otu ihe mgbochi kachasị ọhụrụ bụ na usoro nhazi ụlọ ọrụ ọdịnala na-ewepu ọtụtụ ndị ọrụ kachasị ọhụụ site na nkọwa ọrụ ọrụ, site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na site na ịghara imebi ihe egwu.
Kotter depụtara asatọ dị mkpa chọrọ maka azụmahịa azụmaahịa ịmalite ịmalite ọdịbendị nyocha site n'ime. Ndị a bụ otu ihe ahụ achọrọ iji zụlite omume agile, ekwenyere m.
Ngwa ngwa dị oke egwu - Ohere ahia ma obu iyi egwu agha aghaghi ibu oso oso. Cheta enyi. Ọ na-agba ọsọ na mmetụta uche. Chọta iyi egwu ọ nwere ike ịbanye.
Mepụta njikọ ọnụ - Maka ndị chọrọ isonye na netwọkụ ngwangwa ọhụrụ, ha ga-esite na ngalaba dị iche iche wee nwee ọkwa na ikike sara mbara n'etiti ndị isi ọchịchị. Ma, ikekwe nke kachasị mkpa, ndị otu njikọ ahụ kwesịrị ịbụ ndị ọrụ afọ ofufo na netwọkụ agile. Nke a bụ ihe ịchọrọ otu ndị mmadụ, ọ bụghị inwe otu.
Nwee ọhụụ site na mmepe nke mmemme, ajụjụ iji chọta azịza ya, nwalee ịnwale. - Ihe ọbụla bụ ohere azụmaahịa, mepee echiche maka ihe ị tụrụ anya na ịgagharị nwere ike bụrụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha ezighi ezi, ha kwesịrị ịkwalite mkpali ebumpụta ụwa nke ịma. Ọhụụ ahụ kwesịrị ịmasị mmasị na ọchịchọ ịmata ihe.
Gwa onye ọhụụ maka izu-n'aka ndị ọzọ nke agile na ụlọ ọrụ n'ozuzu ha. - Kwuo okwu gị nke ọma. Ọ dịghị mkpa na ha ga-ahụ ntụpọ, mana ha ga-atọ ụtọ. Nye onye ọ bụla echiche nke ihe mere ị jiri họrọ ụzọ iji chọpụta ma họrọ ezigbo onye edemede nwere ike ịkọwa ya n'asụsụ dị mfe, dị mfe.
Mee ka arụ ọrụ sara mbara. - Ike nke ndị ọchịchị bụkwa nnukwu adịghị ike ya. A na-eme ka mkpebi niile gaa n'elu. Na netwọk agile, echiche na nka nwere ike isite n'aka onye ọ bụla. Ọ bụ ezie na enwere njikọta na-eduzi, ihe a bụ iwepụ ihe mgbochi, ọ bụghị ịnọgide na-enwe usoro iwu. Ebumnuche ahụ bụ ndị isi na-anwa ijikwa njikwa.
Na-eme ememme obere mmeri, nke a na-ahụ anya, nke dị mkpụmkpụ. - Gị netwọk agile agaghị adịte aka ma ị gosipụtara uru ngwa ngwa. Ndi n’agha n’ahu n’otu n’otu ga - egbusi ngwa agha gi, ya abula ibu ngwa ngwa. Mee obere ihe. Họrọ otu ụzọ ị pụrụ isi nweta ya. Mee ya nke ọma. Mee usoro agile. Nke ahụ ga-ewulite ike.
Ekwela ka ike gwụ gị. - N'otu oge ahụ ịchọrọ mmeri, ekwula ngwa ngwa mmeri karịa n'oge adịghị anya. Agile gbasara imuta ihe site na mmeghe na imeghari. Nọgide na-aga n'ihu, n'ihi na mgbe ị na-ewepụ ụkwụ gị na gas, nke ahụ bụ mgbe nguzogide ọdịbendị na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-ebili. Wepụta oge maka mmemme netwọkụ gị. Nọgide na ya, n'agbanyeghị usoro ị na-arụkarị, ọrụ na-arụsi ọrụ ike na-apụta.
Tinye ngbanwe na nkuzi ndị a mụtara na omenaala azụmahịa dum. - Nke a bụ otú netwọk agile nwere ike isi gwa ndị isi ọchịchị. Mgbe ịchọtara ụzọ kacha mma iji mee ihe ma ọ bụ ohere ọhụụ ịchụso, tinye ha n'akụkụ "ọzọ".
Ọ bụghị naanị na usoro asatọ nke Kotter bụ isi ihe ịga nke ọma, mana ọ na-enye ụkpụrụ nduzi atọ iburu n'uche.
Nzọụkwụ asatọ ahụ abụghị usoro. Nzọụkwụ ndị a bụ ihe nlereanya, ọ bụghị usoro ma ọ bụ usoro-ọdịdị, ọ bụghị usoro n'usoro. Ha niile kwesịrị ime, mana ha ekwesịghị ime n ’usoro ọ bụla. Echefula na ị na-echegbu onwe gị banyere iwu.
Ọ ga-abụrịrị ndị ọrụ afọ ofufo ga-abụ ndị ọrụ agile. Ihe dị ka 10% nke ndị ọrụ ga-ezuru, ọ bụrụhaala na ndị nọ na netwọk chọrọ ịnọ ebe ahụ. Adịla naanị gị ma ọ bụ mechibido ikere òkè, mana anwala ịnara ndị mmadụ 100% nwere uche, n'ihi na ha agaghị enwe ọ beingụ ịnọ ebe ahụ ma ha agaghị ahụ uru ọ bara. Dị ka Kotter si kwuo, “Ndị ọrụ afọ ofufo ahụ abụghị ụyọkọ ndị na-eme iwu site na ọla. Ndị otu ya bụ ndị ndu mgbanwe na-eweta ume, ntinye, na ịnụ ọkụ n'obi."
Ndị otu a ga - arụrịrị ọrụ na ndị na - arụ ọrụ n'ime ndị isi ọchịchị, mana ha ga - enwe netwọkụ maka mgbanwe na agility. Netwọk ahụ dị ka sistemụ nke mbara igwe yana njikọta na-eduzi na etiti na atumatu na ntinye akwụkwọ na-agbakọta ma gbasaa dị ka achọrọ. Agaghị ele netwọk ahụ anya dị ka "ọrụ aghụghọ" ma ọ bụ ndị isi ga-emerịrị ya.
Agile bụ egwuregwu nke iweghachitere ebe ọrụ ọgbara ọhụrụ maka ọhụhụ ka mma, ohere, ịzaghachi, ajụjụ, ịchọ ịmata ihe, ime mmụọ na mmemme. Ọ B NOTGH project oru ngo management, mmefu ego reviews, akuko, n'agbụ nke iwu, ụgwọ ma ọ bụ ngosipụta a Mad Men niile na-na atụmatụ. Ọ bụ sistemụ abụọ na ONE nzukọ na-emeju ọnụ –abụghị ọhụụ-ọ bụla ọzọ. Dị ka ọ dị, ndị ọrụ na-eto eto na netwọkụ agile nwere ike iweta ike ọhụrụ ahụ nye ndị isi ọrụ.
Netwọk agile ọhụrụ nwere ike ibido dị ka otu nnukwute, nro, squishy, ​​ndị ọrụ ntinye aka. Nke ahụ dị mma! Ọ na-agbanwe. Ọ bụghị mgbanwe mberede ma ọ bụ dị egwu. Dịka omumu ụlọ, ọ na-ewere nkasi obi na ntụkwasị obi ruo oge.
Na-aga. Mee ka nzọụkwụ ndị ahụ dị obere. Na-agwa ndị mmadụ mmeri site na mmalite. Mee ka ụkwụ gị n'okpuru gị mgbe ị na-ere netwọkụ agile ndị isi ọchịchị dị. Ọ bụrụ na ịmee ihe a niile, uru azụmaahịa ga-apụta tupu ndị isi ụlọ ọrụ nwere ike iwepụ ya dị ka nzuzu, dị iche iche, igbu oge, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-esite na 90% iji wepụta 10%.
Taa igbu oge na-eduga na echi akwa echiche. Ọrụ agile-dị ka okike n'onwe ya abụghị egwuregwu nke 95% -ma ọ ka mma-ịga nke ọma. Ọ bụrụ na ọ bụ, mgbe ahụ onye ọ bụla ga na-eme ya.
Agaghị enwekwa ohere, ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ya.
Na-eto Ngwa Ngwa. Ihe mere Agile Marketing na Business Ji Dị Nnọọ Mkpa Ma Chọrọ.
Tags: agileahịa agileomume agileatụmatụ azụmaahịana-eto ngwa ngwaọhụrụJascha Kaykas-Wolffkotterụmụ nwoke ndị isi mmebimarketingochichi ahiamarketing atụmatụụdị mmiri nsụda mmiri
Etu esi atụghachi nkwụghachi na ntinye nke Social Media